Sekota: Otu esi kpochie bọọlụ site n'ibibi ebe nrụọrụ weebụ gị
Bọọlụ bụ isi ihe na-adịghị ọcha na nke a na - emeghị ihe ọ bụla nke na - eme nchọgharị na ebe nrụọrụ weebụ gị iji rụọ ọrụ dị iche iche. Ọ bụ ụdị ígwè robots dị mkpirikpi ma nwee ike imebi saịtị gị ruo n'ókè dị ukwuu. Ụfọdụ n'ime ihe atụ nke bọọlụ bụ ndị ahụ search engines dere. Ụfọdụ bọọlụ na-aga na ebe nrụọrụ weebụ gị ma na-ezite gị spam na ọnụ ọgụgụ buru ibu, ebe ndị ọzọ nyochaa saịtị gị maka nchedo nchebe. Tupu ị igbochi bọọlụ site na ịhụ saịtị gị, ọ dị mkpa ka ị nọrọ na ebe nrụọrụ weebụ gị na sava weebụ Apache - entwicklung von mobilen anwendungen. Ọzọkwa, onye na-elekọta weebụ gị ga-enye gị ohere nke ".htaccess na-agabiga," ị ga-enwekwa ike ime ya ngwa ngwa o kwere mee. Ị ga-enyocha saịtị ahụ na weblogs weebụ na weebụ ma nweta ebe nrụọrụ weebụ gị na ụlọ ọrụ weebụ.
Ross Barber, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara , kọwakwuru na isiokwu ahụ na ụfọdụ ndụmọdụ bara uru n'akụkụ a.
Ịkwụsị bọtịnụ achọghị
Ọ dị mma ịsị na igbochi bọọlụ achọghị ka ị na - agbalị iji tufuo nje ma ọ bụ pests. Ị nwere ike igbochi bọtịnụ naanị mgbe ị ghọtara ha. Nke mbụ, ị ga-ekpebi adreesị IP ebe bots na-abịa. Maka nke a, ị nwere ike ibudata weblog gị site na onye na-ahụ maka weebụ, wepụ ya na enyemaka nke ebe nchekwa ma meghee na nchịkọta ederede ederede. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ma ụmụ mmadụ ma ọ bụ bots n'ezie na-eleta saịtị gị. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịchọta ihe ntinye nke dị na bọọlụ ma chọọ onye na-elekọta ndị ọrụ..
Rịba ama adreesị IP nke bọọ
Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ amaghị otú e si edekọ adreesị IP ndị bots ji. Kpachara anya ka ị na-eme ihe a dịka saịtị gị nwere ike mebie ma ọ bụrụ na ịnweghị igbochi IP ndị ahụ n'oge ọ bụla o kwere omume. Ụfọdụ virus na malware nwere ike ibunye kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka mgbe ị na-egbochi bots. Ọ bụrụ na ị hụ na otu bots na-abịa site na otu ma ọ bụ adreesị IP dị iche, ị ghaghị igbochi ha niile n'ime nkeji ma mee ka ihe nchọgharị weebụ gị dị ọhụrụ.
Download gị .htaccess File
Ọ bụ ụzọ ọzọ ị ga-esi kpochapụ bọtịnụ na mgbagwoju anya. Ịkwesịrị ibudata faịlụ .htaccess gị site na iji FTP ma ọ bụ SFTP ahịa. Maka nke a, ị ga-aga na ntanetị weebụ kachasị na ebe nrụọrụ weebụ gị, ebe ebe njikọ ebe obibi dị. Lee ị nwere ike ịchọta faịlụ a ma budata ya n'oge mbụ. Ọ bụrụ na ịchọtaghị faịlụ a ebe a, ị nwere ike ịchọta ya ebe ọzọ dabere na usoro FTP ị na - eji.
Mepee ma ọ bụ mepụta .htaccess File
Ozugbo i nwetara faịlụ ahụ, nzọụkwụ ọzọ bụ imeghe ya ma gbanwee ntọala ya. Mepụta akwukwo ozo na kpochapu data ya n'ebe ahu. Maka igbochi otu IP, kwuo, 127.0.0.1, ị kwesịrị itinye ya na faịlụ .htaccess gị ma pịa bọtịnụ mkpọchi.
Iji gbochie bọtịnụ site na ndị na-ahụ maka ndị ọrụ ọrụ, ị kwesịrị ịchọrọ maka ụdọ ahụ na robot na ndị nwere mkpụrụ akwụkwọ mkpụrụedemede nke mkpụrụedemede n'enweghị ohere, slash, na akara akara. Ozugbo ị chọtara ya, ịnwere ike igbochi ya n'ime ngwaọrụ gị ma nwee ike ịbe ebe nrụọrụ weebụ gị nke ọma.